Sida loo qurxiyo maqaarka Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo simo maqaarka Photoshop
Lola curiel | | Qalabka Naqshadeynta, Photoshop, Tababarada
Markii aan aragno sawirro ama sawirro kaamil ah joornaalada, moodello maqaar siman, siman lehna dhalaal aad u sarraysa oo nidaamsan, sawirradaas badanaa waxay qaadaan daaweyn. Nabarrada maqaarka, duuduubnaanta, nabarrada, finanka ... waa wax mararka qaar naga walwal geliya. Adobe Photoshop wuxuu siiyaa xoogaa qalab ah si aan u yareyn karno ama u baabi'in karno calaamadahaas. Casharkaan waxaan kuugu sheegayaa sida loo jilciyo maqaarka Photoshop adigoon ku dhicin natiijooyin macmal ah Ma xiiseyneysaa? Hagaag, sii wad aqrinta boostada!
1 Fur sawirka oo hel qalabyada wax lagu saxo ee ku yaal Photoshop
1.1 Burushka hagaajinta barta
1.2 Burushka weelka
1.3 Hab kale
2 Jilicsan xitaa maqaarka Photoshop
2.1 Lakab nuqul ah oo mari budo iyo xoq
2.2 Codso Gaussian blur
3 Soo kabso faahfaahinta lumay
Fur sawirka oo hel qalabyada wax lagu saxo ee ku yaal Photoshop
Aynu ku bilowno furitaanka sawirka. Waxaan doortay laba, midkoodna wax celis ah malahan markaa si fiican ayaan u arki karnaa howsha. Marka hore waxaan raadineynaa labada qalab ee Photoshop ay bixiso si loo saxo ama tirtir nabarro:
Qalabka Burushka hagaajinta barta
Qalabka burush qarsoon
Labadiinaba waxaad ku leedihiin qolka toolbar. Waan u adeegsanaynaa iyaga nadiifi cilladaha muuqda ee muuqaalka.
Burushka hagaajinta barta
La Qalabka cadayga bogsashada ee 'Spot Hearing Brush' ayaa si toos ah u baaraya sawirka iyo waxa ay qabato waa markii aan gujino "imperfection" ama aagga aan rabno inaan saxno, ku beddel qaar ka mid ah pixels kuwo kale oo laga helay tusaalahaas.
Mashiinka qalabka waxaan wax ka beddeli karnaa astaamahiisa, waxaan beddeli karnaa cabbirka iyo qaabka burushka, laakiin sidoo kale nooca tijaabada, Waxaan kaa codsan karnaa inaad ku buuxiso hadba sida ay u kooban tahay ama aad u hagaajiso aagga aan ugu adeegsanno deegaanka.
Sawirrada sidan oo kale ah, oo ay ku jiraan qaab gaar ah, ikhtiyaarka "la qabsiga deegaanka" wuxuu u eg yahay inuu si fiican u shaqeeyo, asal ahaan maxaa yeelay wuxuu si xushmad leh u sii ixtiraamayaa iyo dib u hagaajinta aan meesha ka saarnay nabarrada halkan ka nadiifsan.
In kasta oo aaladda cows-ka caafimadku ay tahay tan ugu fudud uguna dhaqsaha badan maxaa yeelay waa otomaatig, had iyo jeer ma bixiso natiijooyinka ugu fiican. Tusaale ahaan, marka la eego sawirka chicho waxaa jira granite yar oo aad ugu dhow timaha. Adoo isticmaalaya buraashka asturaha barta, waxaad isku dhejineysaa qaar ka mid ah timahaas natiijaduna ma fiicna. Nasiib wanaag, waxaan ku haysannaa qalab Photoshop ah kaas oo leh waxaan u sheegi karnaa kombiyuutarka waxa aan dooneyno inuu ku saleysnaado sambal ahaan: burushka sixitaanka.
Adiga oo riixaya furaha xulashada (haddii aad la socoto Mac) ama alt (haddii aad la joogto Windows) Waad tilmaami kartaa halka aad doonayso in tijaabada lagu sameeyo hal guji. Waxaan kugula talinayaa inaad tijaabadaada ku saleyso meel maqaarka ka mid ah oo aan cilado badani ka jirin, ka dib Photoshop ayaa si otomaatig ah u hagaajin doona dhalaalka, codka ... Markaad dooraneyso soonaha waxaan sii deyneynaa alt y ya kaliya waa inaan rinji ka saarnaa cilladahaas in aan jeclaan lahaa in la waayo Qalabkani si fiican ayuu u shaqeeyaa, xitaa markaad ku dalbatid dusha sare, sida halkan, sawirkan saddexaad ee aan u isticmaalay baabi'inta aaggan xarkaha.
Hab kale oo qallafsan oo tan lagu sameeyo ayaa ah xulashada aagga aaladda xulashada degdegga ah, iyo tabka Daabacaadda waxaan gujin doonnaa buuxi> sida ku cad content. Waxay bixin kartaa natiijooyin wanaagsan, inkasta oo haddii dusha sare ay aad u ballaaran tahay ... Kuma kalsoonaan doono habkan aad iyo aad.
Jilicsan xitaa maqaarka Photoshop
Markaan saxno cilladaha muuqda, aan aragno sida loo jilciyo maqaarka xitaa inbadan Photoshop. Tan awgeed, waxa aan sameyn doono ayaa ah mari shaandhooyin kala duwan oo aad isku hagaajiso natiijooyinka dabiiciga ah ee ugu macquulsan.
Lakab nuqul ah oo mari budo iyo xoq
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah lakabka sawir nuqul, inaad nuqul ka sameysato lakabyo aad horayba u ogayd inaad ku samayn karto adoo riixaya oo siinaya lakab labalaab ah, ama meesha ugu weyn, lakabka> lakabka nuqul. Hadana haddii aad furaysid sidoo kale waad nuqul ka sameysan kartaa oo aad ku dhejin kartaa amarka kumbuyuutarka amarkiisa + c, ka dibna amar + v.
Marka aan nuqul ka sameysano lakabka, waxaan u adeegsaneynaa shaandho. Waxaan aadeynaa menu-ka weyn oo aan xulaneyno shaandhada, buuqa, boodhka iyo xoqida. Halbeegyada aan halkaan ku siineyno waxay ku xirnaan doonaan cabirka sawirka, waxaad siisay si aad u eegto oo aad tijaabinta u aaddo, waxaan uga tagayaa 4 iyo 0. Maskaxda ku hay in haddii aad natiijada ku dhaafto ay tahay mid aad u dabiici ah oo ay tahay ma ahan waxa aan raadineyno.
Markaad codsato shaandhadaan, waxaa jiri doona faahfaahinta sawirka lumay, ha ka welwelin taas hadda maxaa yeelay goor dambe ayaan xallin doonnaa.
Codso Gaussian blur
Lakabkan isku midka ah, waxaan dooneynaa inaan codsano shaandho labaad, aan tagno si aan u sifeyno> gaussian blur. Mar labaad qiimayaasha halkan ku yaal ayaa tilmaamaya, waxaan siin doonaa gacan 2, laakiin waxaad isku daydaa oo aad la sii joogtaa qiimayaasha inta badan ku qanciya. Waa inaan hubinno in maqaarku leeyahay saameyntaas jilicsan.
Talaabadan ugu dambeysa gebi ahaanba waa ikhtiyaari. Ma jecli inaan dib u taabto iyaga oo u muuqda kuwo macmal ah, maqaarka ayaa la miiray iyo qoraalkaas marka la gelinayo miirayaasha ayaa lumay, taasi waa sababta aan aakhirka u ahay Waxaan jecelahay inaan buuq yar dhex dhigo, Waxaan dhigayaa 0,7 dhexdeeda.
Soo kabso faahfaahinta lumay
Horey ayaan horey usheegay intaan kudareyno miirayaasha si aan maqaarka ugu jilcino Photoshop, waxaa jira faahfaahino lumay. Tusaale ahaan, sawirka wiilka, aagga gadhka iyo timaha Sideen ula soo bixi karnaa faahfaahintaas? Hagaag, waxa runtii aan ubaahanahay ayaa ah in miirayaasha ay khuseeyaan oo kaliya maqaarka oo aysan ku xirnayn lakabka oo dhan iyo intaas. waxaan ku guuleysaneynaa sameynta maaskaro lakab ah.
Si loo abuuro maaskaro lakab ah waa inaan: xulo lakabka oo guji calaamadda ka muuqata sawirka. Sidaad arki karto, maaskarada ayaa marka hore soo muuqan doonta midab cad, taas oo macnaheedu yahay inay ku jiraan wax kasta oo lakabka ku yaal Gujinaya kombuyuutarkayaga amar + I, aan ku rogno maaskaro in laga saaro wax walba, marka la riixayo toobiye keyboard maaskaro wuxuu noqon doonaa midab madow.
Burushka iyo xulashada midabka cad, waxaan ku jiidaneynaa waxa aan rabno inaan ku darno, taasi waa in la yiraahdo, meelaha aan ka dooneyno in shaandhadaas la mariyo, haddii aad khalad samayso, ha ka welwelin, burushka madow waad ka reebi kartaa xulashadaas. Haddii aad si dhow u fiirsato, waxaad arki doontaa inaad ka soo kaban karto faahfaahintaas, in kasta oo run ahaantii waxa aad sameyneyso ay ka tegayaan lakabka asalka ah ee muuqda (midka leh nooca asalka ah ee sawirka) kaas oo ah midka runta ilaaliya.
Tani waxay noqon laheyd natiijada ugu dambeysa, maxaad u maleyneysaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida loo simo maqaarka Photoshop
Adobe Photoshop wuxuu horeyba ugu jiraa Macs-ka Apple Silicon